Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ elementrị mara mma, “Olee otu esi arụ ọrụ mgbasa ozi na weebụsaịtị?” Usoro a dị oke mgbagwoju anya ma na - eme n’oge dị oke egwu. Enwere ndị nkwusa n'ụwa niile na-enye ndị dị mkpa, ndị agbadoro ozi mgbasa ozi na-anwa iru. Mgbe ahụ, a na-enwekwa mgbanwo mgbasa ozi n ’ụwa niile, agbanyeghị, ebe ndị na-akpọsa ngwa ahịa nwere ike ịchọta, gbaa akwụkwọ ma debe mgbasa ozi. Gịnị bụ ihe Ad Server Ad sava bụ usoro